RIP: फ्र्याक Batten Sr - अरबपति तपाईं कहिल्यै सुन्नुभएन | Martech Zone
धेरै व्यक्तिहरूले कहिल्यै ह्याम्प्टन रोड्स, भर्जिनिया बाहिर फ्र्याक बैटन एसआर सुनेका छैनन्। जब मैले यु.एस.को नौसेना छोडेर भर्जिनियन पाइलटमा काम गर्न गएँ, प्रेसमेनले मैले ती राम्रा चीजहरू मात्र सुनेन जुन उनीहरूले बोलेको बेला अखबारमा काम गर्थे। फ्रान्क Sr। उनी प्रेसहरूमा बाहिर आउँदछन् र सबै कर्मचारीहरूसँग च्याट गर्न जान्दछन् - जस मध्ये धेरै जसलाई उसको कम्पनीहरूले ठुलो ठूलो नभएसम्म नामले चिनेका थिए।
धेरै वर्षसम्म, ल्यान्डमार्क कर्मचारीहरूले आफ्नो जन्मदिन छुट पाए र क्रिसमसमा २ हप्ता बोनस प्राप्त गरे। जब समय गाह्रो भयो वा विभागहरू फोल्ड भयो, हामी छनौट गरेनौं - कर्मचारीहरू स्वेच्छाले सेवानिवृत्त भए वा कम्पनीमा अन्य स्थानहरूमा सारिए। यो सँधै फ्रान्कका साथ काम गर्नेहरूको बारेमा थियो।
जब ल्याण्डमार्क कम्युनिकेशन्सले कुल गुणवत्ता व्यवस्थापन, लक्षित चयन हाइरिंग, र लगातार सुधार कार्यक्रम अपनायो, सबै प्रबन्धकहरूले आफूले चाहेको सम्पूर्ण प्रशिक्षण पार गरे। मेरो बिसौं वर्षको उमेरमा, मैले कार्यकारी नेतृत्व प्रशिक्षणमा पनि भाग लिएँ र व्यक्तिगत रूपमा फ्रान्कलाई भेटें। केहि छोटो वर्षमा, मैले अधिक नेतृत्व र व्यवस्थापन अनुभव प्राप्त गरे जुन धेरै व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण क्यारियरको भन्दा बढी छ। फ्रान्कले विश्वास गरे कि राम्रो कर्मचारीहरू शिक्षित र उपचारित छन्, कम्पनीले राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो। यसले काम गर्यो।
त्यतिन्जेल, फ्रान्कले घाँटीको क्यान्सरबाट आफ्नो आवाज गुमाए पछि आफूलाई डुबाएर बोल्न सिकाएका थिए। तपाईं स्पष्ट रूपमा उसको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। एक व्यक्तिले सोधे, "फ्र्याक कति छ? र उनको उत्तर यो थियो कि यो पैसाको बारेमा थिएन - यो कम्पनीको भविष्य सुरक्षित गर्ने बारेमा थियो र सबै परिवारको बारेमा सोच थियो जुन उनीहरूको टाउकोमा छाना थियो।
फ्रान्कले भनेको सब भन्दा चाखलाग्दो कहानी भनेको त्यो सुरुवात हो मौसम च्यानल। यो जस्तो देखिन्छ पनि, कम्पनीले रक्तस्राव गरिरहेको थियो र फ्रान्कले भने कि उनले शाब्दिक रूपमा सबैको गुलाबी पर्ची उनको ट्रंकमा थियो। यद्यपि उसले एउटा मौका लिए, र केबल कम्पनीहरूले सम्पूर्ण उद्योग परिवर्तन गर्ने प्रति घर शुल्कमा कुराकानी गरे! यसले केबल टेलिभिजनमा सब भन्दा सफल च्यानलहरू सुरू गर्‍यो। यदि उसले घाँटीको क्यान्सर लड्दैनथ्यो, हामीसँग टेड टर्नरको सीएनएनको सट्टा ल्याण्डमार्क न्यूज नेटवर्क हुन सक्छ।
व्यक्ति फ्रान्क बाटनको बारेमा थाहा छैन किनकि ऊ शान्त, विनम्र परोपकारी थियो। मलाई याद छ जब कर्पोरेटले फ्रान्कलाई उनको कार्यालयहरू फिर्ता गर्न बाध्य पार्‍यो र धेरै वर्षसम्म उसले पिटिएको सोफा र डेस्कबाट छुटकारा पायो। उनी कम्पनीमा, समुदाय र मानवताको लागि एक साँचो च्याम्पियन थिए। पृथकीकरणको क्रममा, उनले आफ्नै जीवनलाई जोखिममा हाले र एकीकरणको लागि बोले सही गर्नु थियो.
यो मेरो लागि दु: खी दिन हो र मेरो परिवारमा उनको समवेदना छ, विशेष गरी फ्रान्क बैटन जुनियर। मलाई गर्व छ कि मैले फ्रान्क बैटेन, सिनियरलाई भेटें, जब म जनताको सफलताको नाप गर्दछु, अक्सर फ्र्याकको सम्झनाको बिरूद्ध हुन्छ। उहाँ विनम्र, कडा परिश्रम गर्ने, सराहनीय हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अविश्वसनीय रूपमा राम्रो व्यवहार गर्नुभयो, र अझै पनि आफ्नो व्यवसाय बढाउनमा सक्षम हुनुहुन्थ्यो। कसैले पनि मापन गरेको छैन र म पक्का छु कि कोहीले कहिल्यै गरेन!
थप पढ्नुहोस् फ्रान्क बाटनको मनमोहक जीवनको बारेमा जुन भर्जिनियन-पाइलटमा अर्ल स्विफ्टले लेखेका थिए। फ्रान्क बैटन Sr अरबपति थिए तपाईंले सायद कहिल्यै सुन्नु भएन - तर तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको जीवनबाट तपाईंले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ।
टैग: अरबपतिखोल्नुहोस् batten srस्थलचिह्न संचारपरोपकारीपरोपकारीभर्जिनियन पोल्टमौसम च्यानल
ECourse र ठेगाना दुईको साथ ब्लग ट्राफिक निर्माण गर्नुहोस्
सेप्टेम्बर १,, २०११ 16::2009० अपराह्न
डग, कसैलाई कत्ति राम्रो श्रद्धांजलि छ कि जसले तपाईंलाई स्पष्ट रूपले मद्दत पुर्यायो। हामी सबै यति भाग्यशाली हुनुपर्दछ कि हाम्रो क्यारियरमा खोज्नको लागि "फ्रान्क" छ!